रम्भा गाउँपालिकाको २८ महिना : पूर्ण संस्थागत सुत्केरी गाउँपालिका घोषणादेखि विद्यार्थीको दुर्घटना विमासम्म ! – KhabarKhurak
रम्भा गाउँपालिकाको २८ महिना : पूर्ण संस्थागत सुत्केरी गाउँपालिका घोषणादेखि विद्यार्थीको दुर्घटना विमासम्म !
पाल्पा, २७ कात्तिक । जिल्लाको रम्भा गाउँपालिकाले २८ महिने कार्यकालको मुख्य २८ उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ ।
यसरी आफ्नो उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने गाउँपालिका मध्य रम्भा गाउँपालिका प्रदेशमै पहिलो बनेको छ । जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनमा पत्रकार सम्मेलन गरी २८ महिनाको उपलब्धी सार्वजनिक गरेको हो ।
गाउँपालिकालाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी गाउँपालिका घोषणा गर्ने देखि विद्यार्थीको दुर्घटना विमा कार्यक्रम मुख्य उपलब्धीको रुपमा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वर्थिङ सेण्टर स्थापना गरीएको छ । गतवर्ष मात्रै गाउँपालिका भित्रका कुल १ सय ३ जना आमा संस्थामा पुगेर सुत्केरी भएका छन् । साथै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएवापत आमा र बच्चाको पोषणयुक्त खानाको लागि प्रति सुत्केरी १ हजार ५ सय राहत समेत उपलब्ध गराइएको छ।
यस्तै ५ वटै स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला सञ्चालन भएको छ । रगत, दिशा, पिसाव, खकार जस्ता १६ प्रकारको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसको निशुल्क परीक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जुन कार्यक्रमबाट १ हजार ४ सय विद्यार्थी लाभान्वीत भएका छन् । वालवालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अझै आकर्षित गर्न दुर्घटना विमाको लागि वजेट विनियोजन गरेका छौं । १५ सय विद्यार्थीको गाउँपालिकाबाट निशुल्क दुर्घटना विमा हुने छ । बाल कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको विमा गरिने छ अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुहुन्छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ स्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक अध्ययनतर्फ कृषि वाली विज्ञान सञ्चालनमा आएको छ । जहाँ ४८ जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने पाएका छन् । यो पनि गाउँपालिकाको उपलब्धी भित्र परेको छ उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई मध्यनजर गरी शिक्षकलाई तीनदिने कम्प्युटर शिक्षा तालिम दिएका छौं । जसले गर्दा प्रत्येक विद्यालयमा एकजना कम्प्युटर शिक्षकको परिपूर्ती भएको छ । र कम्प्युटर विषयको पढाई प्रभावकारी बनेको छ ।
यस्तै सिंगो गाउँपालिकालाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ कृषकलाई अनुदानमा आलुको विउ वितरण गरिएको छ । गतवर्ष ५० प्रतिशत अनुदानमा २२०.५ क्वीण्टल आलुको विउ वितरण गरिएको हो । फलस्वरुप १० गुनाले उत्पादनमा वृद्धि भएको छ उहाँले थप्नुभयो आलु उत्पादनमा सफल भएपछि कृषकको माग अनुसार गाउँपालिकाले जिल्लामा एकमात्र शीतभण्डारको निर्माण गरेको छ । यो वर्षदेखि उत्पादित आलु कृषकले शीतभण्डारमा राख्न पाउनेछन् ।
कृषकलाई ५ वटा थ्रेसर, ९० वटा टनेल २९ वटा हाते ट्याक्टर ५० प्रतिशतमा अनुदानमा प्रदान गरिएको छ ।
रम्भा गाउँपालिकालाइृ दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेका छौं । पशु व्यवसायको लागि छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरिएको छ अध्यक्ष भण्डारीले भने पहिलो चरण अन्र्तगत व्यावसाय दर्ता गरी ५ वटा भैंसी पाल्नेलाई २ लाख अनुदान, १० वटा बंगुर पाल्नेले १ लाख, ५० वटा बाख्रा पाल्नेलाई १ लाख, र ३ सय वटा लोकल कुखुरा पाल्नेलाई ४० हजार नगद अनुदान दिएका छौं ।
पर्यटकलाई आकर्षण गर्न विभिन्न महोत्सव सञ्चालन गरिएको छ । सम्पन्न दुइवटा महोत्सव अवलोकन गर्न आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक गरी झण्डै ५० हजार आएका छन् ।
उहाँका अनुसार ७५ जना युवालाई हाउस वायरिङ, फ्रिज मर्मत र पलम्विङ सम्बन्धी र २८ जना महिलालाई ढाका बुन्ने तालिम दिइएको छ । युवाले पलम्बरको काम गरेर मासिक ४० हजार आम्दानी गरेका छन भने महिला ढाका बुन्ने तालिमको प्रशिक्षक बनेका छन् । कतिपयले तानबुन्ने व्यावसाय थालेका छन् । ५ जना एकल महिलालाई पूर्ण अनुदानमा र २३ जना महिलालाई ५० प्रतिशत अनुदानमा तान प्रदान गरिएको छ ।
पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर २, ४ र ५ पूर्ण सरसफाई युक्त वडा घोषणा भइसकेका छन् । मंसिर महिनामा बाँकी १ र ३ वडा पनि घोषणा गर्नेगरी काम तीव्ररुपमा भइरहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो वर्ष बाँकी रहेको खरका छाना विस्थापित गर्नको लागि ७० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । गएका वर्षमा धेरै घरहरु विस्थापित गरिसकेका छौं उहाँले भन्नुभयो बाँकी ३ सय ३३ घर यो वर्ष खरको छाना मुक्त हुनेछन् ।
यस्तै गएको दुइ वर्षमा ४८ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ भने २२० किमि भन्दा वढी सडकको स्तरउन्नती गरिएको छ । प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार प्रत्येक टोलटोलमा यातयातको पहुँच पुगेको छ । यद्यपि बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्नेगरी स्तरोन्नती भइरहेको छ ।
हुँगीको अम्लिाटारमा विशाल फुटवल खेल मैदान र अर्सेदीमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार क्रिकेट खेल मैदान निर्माणको कार्य चलिरहेको छ ।
गाउँपालिकाभित्र ६५ प्रतिशत घरधुरीमा एक घर एक धारा सम्पन्न भएको छ। बाँकी घरपरिवारमा योजनाहरु सञ्चानमा रहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो ।
परम्परागत पेशा सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत नौमति बाजा वितरण गरिएको छ । भने आरनलाई अनुदानमा उपकरण प्रदान गरिएको छ । प्रत्येक वडा कार्यालय र विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गरिएको कार्यलाईपनि उपलब्धी ठानिएको छ । टुकी रहित गाउँपालिका घोषणा गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
जनताको माग र आवश्यकता अनुसारका योजनालाई गाउँपालिकाले प्राथमिता दिएको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाका अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वयमा जनताको हितमा काम गर्न सुझाव दिनुभयो।